Muqdisho: Dhallinyaro shaqo abuur ka helay makhaayad sameysa cunnooyinka dalka | Radio Himilo
Home / Arrimaha Bulshada / Muqdisho: Dhallinyaro shaqo abuur ka helay makhaayad sameysa cunnooyinka dalka
Posted by: Ahmed Haaddi May 14, 2022
Ku Dhawaad 30 dhallinyaro ah ayaa shaqo abuur ka helay Makhaayad ku taalla Muqdisho oo sameysa cunnooyinka dalka ka soo go’a. Dhallinyaradan waxaa kuwo jira kuwo jaamacddo dhammeeyay oo shaqo la’aanta la dhibaatoonayay.
Waxay isugu jiraan gabdho iyo wiilal, waxay qabtaan shaqooyin kala duwan sida karinta dallagga gudaha iyo soo dhaweynta macaamiisha. Waxay qaataan mushaar ay ka maareeyaan nolosha qoysaskooda oo isbeddel u horseeday.
Hal abuurka Makhaayadda Hiddasoor waxaa iska leh dhalinyaro, waa ta keentay inay dhalinyaro fara badan u noqoto bartilmaaameed, ujeedada loo aasaasay waxay ku sheegeen inay doonayaan dheerigelinta beelareyda dalka oo aan wax soo saarkoooda suuq fiican u heli jirin.
Qaar ka mid ah beeraleyda iyo dadka ka ganacsada raashinka gudaha ka soo go’a ayay suuq u tahay.
Makhaayadda oo ah mid xoogga saarka cunnooyinka dalka, waxaa Derbiyadeeda ku sharraxan agab dhaqameed kala duwan, halka kuraasta lagu fariisto ay ku jiraan gambarro. Waxaa yimaada dad cunnooyinka kale uga caagay currada sonkorta iyo dhiig karka, iyo dadka jecel kuwa dalka.
Dhalinyarada hirgeliyay waxay sheegeen in qofka yimaadana ay ugu talageen inuu agab hiddaha ee yaalla xarunta uu ka barto waxyaabihii soo jireenka ahaa ee ay Soomaalidii hore u ku adeegsan jirtay Miyiga.
Previous: Maqal– Raxiiqul Makhtuum – Casharka 198aad
Next: Allow xildhibaanku dooraa mid inoo dan ah